प्रोस्टेट-विशिष्ट एन्टिजेन (पीएसएName) रगत जाँच
समय: 2019-10-11 दृश्य:
PSA परीक्षण के हो??
प्रोस्टेट-विशिष्ट एन्टिजेन, वा PSA, सामान्यबाट उत्पादित एक प्रोटीन हो, साथै घातक, प्रोस्टेट ग्रंथि कोषहरू. PSA परीक्षणले एक व्यक्तिको रगतमा PSA को स्तर मापन गर्दछ. यो परीक्षणको लागि, रगतको नमूना विश्लेषणको लागि प्रयोगशालामा पठाइन्छ. परिणामहरू सामान्यतया प्रति मिलीलिटर PSA को नानोग्रामको रूपमा रिपोर्ट गरिन्छ (एनजी / एमएल) रगत को.
प्रोस्टेट क्यान्सर भएका पुरुषहरूमा पीएसएको रगतको स्तर प्रायः माथि उठाइन्छ, र PSA परीक्षण मूल रूपमा एफडीए द्वारा अनुमोदित भएको थियो 1986 पुरुषहरूमा प्रोस्टेट क्यान्सरको प्रगतिको निगरानी गर्न जो यस रोगको निदान भइसकेका थिए. मा 1994, एफडीएले डिजिटल रेक्टल परीक्षाको साथ संयोजनको रूपमा PSA परीक्षणको प्रयोगलाई अनुमोदन गर्‍यो (DRE) एसिम्प्टोमेटिक परीक्षण गर्न प्रोस्टेट क्यान्सर को लागी पुरुषहरु. पुरुषहरू जसले प्रोस्टेट लक्षणहरू रिपोर्ट गर्छन् प्राय: PSA टेस्टिंग गरिन्छ (DRE सँगै) डाक्टरहरूले समस्याको प्रकृति निर्धारण गर्न मद्दत गर्न.
प्रोस्टेट क्यान्सरको अतिरिक्त, सौम्य संख्या (क्यान्सर नभएको) अवस्थाले मान्छेको PSA स्तर वृद्धि गर्न सक्दछ. प्राय: प्राय: सौम्य प्रोस्टेट अवस्थाहरू जुन PSA लेभलमा एक उचाईको कारण निम्त्याउँछ प्रोस्टाटाइटिस हो (प्रोस्टेट को सूजन) र सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (बि पि एचName) (प्रोस्टेट को विस्तार). त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन कि प्रोस्टाटाइटिस वा बीपीएचले प्रोस्टेट क्यान्सर निम्त्याउँछ, तर यो सम्भव छ कि एउटा मानिस यी दुवै अवस्थामा वा यी दुवै अवस्थामा र प्रोस्टेट क्यान्सरको विकास पनि गर्न सक्छ.
सामान्य PSA स्तर के हो??
कुनै पनि उमेरमा कुनै पनि व्यक्तिको लागि सामान्य PSA जस्तो कुनै चीज छैन, तर प्रोस्टेट क्यान्सरका धेरैजसो पुरुषहरू सामान्य स्तर भन्दा उच्च छ. सामन्यतया:
सुरक्षित:0गर्न 2.5 एनजी / एमएल
धेरैको लागि सुरक्षित: 2.6 गर्न4एनजी / एमएल. अन्य जोखिम कारकहरूको बारेमा तपाइँको डाक्टर संग कुरा गर्नुहोस्
शंकास्पद:4गर्न 10 एनजी / एमएल. त्यहाँ छ 25% संभावना तपाईं प्रोस्टेट क्यान्सर छ.
खतरनाक: 10 एनजी / एमएल र माथिको. तपाईंको डाक्टरसँग अहिले नै कुरा गर्नुहोस्. त्यहाँ छ 50% संभावना तपाईं प्रोस्टेट क्यान्सर छ.
PSA स्क्रिनिंग टेस्ट कसरी भयो?
परीक्षणमा रगत लिनु समावेश छ, सामान्यतया तपाईको पाखबाट. डाक्टरले नमूना प्रयोगशालामा पठाउनेछ. परिणाम प्राय जसो धेरै दिन भित्र फिर्ता आउँदछ.
जब म मेरो PSA स्तर जाँच गर्न पर्छ?
गर्न को लागी सर्वप्रथम तपाईको डाक्टरसँग प्रोस्टेट क्यान्सरको पक्षधर र विपक्षको बारेमा कुरा गर्नु हो स्क्रीनिंग तपाईले निर्णय लिनु भन्दा पहिले. तपाईंसँग त्यो कुरा नभएसम्म जाँच नहुनुहोस्. तपाईले कहिले गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा मतभिन्नता फरक छ.
अमेरिकी क्यान्सर समाजले उमेरमा टेस्ट लिन भन्छ:
40 वा 45 यदि तपाईं उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ भने
50 यदि तपाईं औसत जोखिममा हुनुहुन्छ भने
अमेरिकी यूरोलोजिकल संघ सुझाव दिन्छ:
अन्तर्गत 40: स्क्रिनिंग छैन
40 गर्न 54: कुनै स्क्रीनिंग यदि तपाईं औसत जोखिममा हुनुहुन्छ भने. यदि तपाईं उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ भने, तपाईं र तपाईंको डाक्टर निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ.
55 गर्न 69: स्क्रीनिंग यदि तपाइँको डाक्टर सुझाव दिन्छ
माथि 70 वाaभन्दा कम 10-15 वर्षको आयु: स्क्रिनिंग छैन
संयुक्त राज्य अमेरिका. निवारक सेवा टास्क फोर्स भन्छ:
55 गर्न 69: प्रोस्टेट क्यान्सर जोखिम भएका पुरुषहरू परीक्षण आवश्यक हुन सक्छ.
यदि तपाइँको डाक्टर सोच्दछ कि तपाइँ प्रोस्टेट क्यान्सर हुन सक्छ कि त PSA स्तर वा मलाशय परीक्षा मा आधारित छ, बायोप्सी अर्को चरण हो. यो एक परीक्षण हो जहाँ डाक्टरले तपाइँको प्रोस्टेटबाट टिश्युको सानो मात्रा लिन्छ र यसलाई परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा पठाउँदछ. तपाईलाई क्यान्सर छ भनेर निश्चित हुनु यो एक मात्र तरीका हो.
एक उच्च PSA स्तरको मतलब के हो?
उच्च PSA स्तर प्रोस्टेट क्यान्सरको संकेत हुन सक्छ वा प्रोस्टाटाइटिस वा विस्तारित प्रोस्टेट जस्तो फरक अवस्था.
अन्य चीजहरूले तपाईंको PSA स्तरलाई असर गर्न सक्दछ:
उमेर. तपाईंको PSA सामान्य रूपमा बिस्तारै माथि जान्छ तपाईं ठूलो हुँदै जाँदा, तपाईको कुनै प्रोस्टेट समस्या छैन भने पनि.
औषधी. केही ड्रग्सले रगत PSA लेवललाई असर गर्न सक्छ. तपाईको डाक्टरलाई भन्नुहोस् यदि तपाई ड्युटेराइड लिदै हुनुहुन्छ भने(एभोडार्ट) वा फिनस्ट्राइड (प्रोपेशिया वा प्रोस्कार). यी औषधिहरूले PSA स्तरहरू झूटा कम गर्न सक्छन् आधा के द्वारा तिनीहरू हुनुपर्दछ.
यदि तपाईंको PSA स्तर उच्च छ, तपाईंको डाक्टरले सुझाव दिन्छ कि तपाईंले क्यान्सरको लागि टेस्ट गर्न प्रोस्टेट बायोप्सी लिनुहोस्.
नयाँ PSA परीक्षणहरूले तपाईंलाई बायोप्सी चाहिन्छ कि भनेर निर्णय गर्न डाक्टरलाई मद्दत गर्दछ. तर थाहा छ कि डाक्टरहरू जहिले पनि यी परीक्षणहरूको नतीजा प्रयोग वा बुझ्ने कुरामा सहमत हुँदैनन्.
वैकल्पिक PSA परीक्षण
प्रतिशत-मुक्त PSA. PSA रगतमा दुई प्रमुख रूप लिन्छ. एउटा रक्त प्रोटिनमा जोडिएको हुन्छ. अन्य स्वतन्त्र रूपमा चारै तिर. प्रतिशत-मुक्त PSA परीक्षण देखाउँछ कति PSA कुल PSA स्तरको तुलनामा स्वतन्त्र रूपमा हिडछ. प्रोस्टेट क्यान्सर भएका पुरुषहरूमा नि: शुल्क PSA को मात्रा कम छ. यदि तपाइँको PSA परिणाम सीमा रेखा मा छन् (4 गर्न 10), कम प्रतिशत मुक्त PSA (भन्दा कम 10%) मतलब त्यहाँ एक बारे मा छ 50% संभावना तपाईं प्रोस्टेट क्यान्सर छ. तपाईसँग सायद बायोप्सी हुनु पर्छ. केही डाक्टरहरूले पुरुषहरूको बायोप्सी सुझाव दिन्छन् जसको प्रतिशत मुक्त PSA छ 20 वा कम.
PSA वेग. PSA वेग अलग परीक्षण छैन. सट्टा, यो समयको साथ तपाईंको PSA स्तरहरूमा परिवर्तनको एक उपाय हो. जब कुल PSA मान भन्दा बढि हुँदैन 4, एक उच्च PSA वेग (भन्दा बढि एक उदय 0.75 एनजी / एमएल भित्र 1 वर्ष) यसको मतलब तपाईलाई क्यान्सर हुन सक्छ र बायोप्सीमा विचार गर्नु पर्छ.
मूत्र PCA3 परीक्षण। यो मूत्र परीक्षण जीनको मिश्रण खोज्छ जुन भित्र देखिन्छ 50% प्रोस्टेट क्यान्सरको पीएसए-परीक्षण पुरुषहरूको. यदि तपाइँ एक बायोप्सी चाहिन्छ भने यो निर्णय गर्न को लागी अर्को उपकरण हो.
परीक्षण को सीमाहरु
को सीमाहरु पीएसएName परीक्षण समावेश छ:
PSA उठाउने कारकहरु. क्यान्सर बाहेक, उठाउन सक्ने अन्य शर्तहरु PSA स्तर मा एक बढेको प्रोस्टेट शामिल छ (सौम्य प्रोस्टेटिपीएसएName हाइपरप्लासिया, वा BPH) र एक सूजन वा संक्रमित प्रोस्टेट (प्रोस्टाटाइटिस). पनि, PSA स्तर सामान्यतया उमेर संग बढ्छ.
PSA कम गर्ने कारकहरु. केहि औषधिहरु को उपचार को लागी प्रयोग गरीन्छ बि पि एचName वा मूत्र अवस्था, र केहि केमोथेरापी औषधि को ठूलो खुराक, कम गर्न सक्छ PSA levels. मोटोपना पनपीएसएName क�स्तरहरू��न सक्छ PSA levels.
भ्रामक परिणाम. परीक्षण सधैं एक सही परिणाम प्रदान गर्दैन. एक उन्नत PSA स्तर जरूरी मतलब छैन कि तपाइँ क्यान्सर हुन�पीएसएName�ुन्छ. र प्रोस्टेट क्यान्सर संग निदान धेरै पुरुषहरु एक सामान्य छ PSA स्तर.
अति निदान. अध्ययनले अनुमान लगाएको छ कि बीचमा 23 र 42 प्रोस्टेट क्यान्सर भएका पुरुषहरुको प्रतिशतले पत्ता लगाएको छ पीएसएName परिक्षणमा ट्यूमर छ कि परिणामहरु लाई आफ्नो जीवनकाल मा नतिजा गर्दैनन्. यी लक्षण मुक्त ट्यूमर overdiagnoses मानिन्छ — क्यान्सर को पहिचान गरीब स्वास्थ्य को कारण हुन सक्दैन वा मानिस को जीवन को लागी एक जोखिम प्रस्तुत गर्न को लागी.
को सम्भावित जोखिमहरु पीएसएName परीक्षण अनिवार्य रूप बाट छनौटहरु तपाइँ परीक्षण परिणामहरु को आधार मा बनाउन संग सम्बन्धित छन्, जस्तै प्रोस्टेट क्यान्सर को लागी थप परीक्षण र उपचार गर्न को लागी निर्णय. जोखिमहरु सामेल छन्:
बायोप्सी मुद्दाहरु. बायोप्सी एक प्रक्रिया हो कि यसको आफ्नै जोखिम बोक्छ, दुखाइ सहित, रक्तस्राव र संक्रमण.
मनोवैज्ञानिक प्रभाव. गलत-सकारात्मक परीक्षण परिणाम — उच्च पीएसएName स्तर तर बायोप्सी संग कुनै क्यान्सर भेटिएन — चिन्ता वा समस्या पैदा गर्न सक्छ. यदि तपाइँ प्रोस्टेट क्यान्सर संग निदान हुनुहुन्छ, तर यो एक बिस्तारै बढ्दो ट्यूमर हो कि रोग मा परिणाम गर्दैन जस्तो देखिन्छ, तपाइँ महत्वपूर्ण चिन्ता अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ मात्र थाहा छ यो त्यहाँ छ.
प्रोस्टेट क्यान्सर निदान पछि पीएसए रक्त परीक्षण को उपयोग
यद्यपि पीएसए परीक्षण मुख्यतः प्रोस्टेट क्यान्सर को लागी जाँच गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ, यो तपाइँको डाक्टर लाई पनि मद्दत गर्न सक्छ:
एक उपचार छान्नुहोस्. एक परीक्षा र ट्यूमर चरण संगै, PSA परीक्षण कसरी प्रोस्टेट क्यान्सर उन्नत छ निर्धारण गर्न मद्दत गर्न सक्छ. यसले उपचार विकल्पलाई असर गर्न सक्छ.
उपचार सफलताको जाँच गर्नुहोस्. शल्यक्रिया वा विकिरण पछि, डाक्टर तपाइँको PSA स्तर हेर्न को लागी यदि उपचार काम गरीयो हेर्न सक्नुहुन्छ. पीएसए स्तर सामान्यतया खस्छ यदि क्यान्सर को कोशिकाहरु को सबै हटाइयो वा नष्ट भयो. एक बढ्दो पीएसए स्तर को मतलब यो हुन सक्छ कि प्रोस्टेट क्यान्सर कोशिकाहरु उपस्थित छन् र तपाइँको क्यान्सर फिर्ता भएको छ.
यदि तपाइँ उपचार को लागी एक सतर्क प्रतीक्षा दृष्टिकोण छनौट गर्नुहुन्छ, तपाइँको पीएसए स्तर तपाइँको डाक्टर लाई बताउन सक्छ यदि रोग प्रगति भैरहेको छ. यदि हो भने, तपाइँ सक्रिय उपचार को बारे मा सोच्नु पर्छ. हार्मोन थेरापी को समयमा, PSA स्तर देखाउन सक्छ कि कती राम्रो उपचार काम गरीरहेको छ र जब यो अर्को उपचार को प्रयास गर्ने समय हो.
अघिल्लोएक विस्तारित प्रोस्टेट को लागी आहार सल्लाह
अर्कोहाइपोथायरायडिज्म, थप र थप महिला को लागि एक स्वास्थ्य खतरा